ukujongana: ukuthenga okungcono kunika izaphulelo ezibalulekileyo kwiimodeli ezahlukeneyo zokubukela iapile
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Isivumelwano: Ukuthenga okungcono kunika izaphulelo ezibalulekileyo kwiimodeli ezahlukeneyo ze-Apple Watch 2
Nangona iApple sele isungule Uthotho lwesi-3 , Uluhlu lwayo lwangaphambili lweewatchwatches lusathengisa kakuhle, ngakumbi ukuba abathengisi abaninzi ngoku baziphungula izixhobo ezinokunxitywa ukwenza indawo yeemodeli ezintsha.
Ukuthenga okungcono kuqhuba inkuthazo enomdla kwiApple Watch Series 2 Sport kunye neNike +, ke ukuba ucinga ukutshaja iwotshi yonke imihla yinto onqwenela ukuyenza, ke, ngazo zonke iindlela, ungaqhubeka uthenge enye kwicala elinexabiso eliphantsi.
Kukho ngaphezu kwe-10 Uthotho lweApple 2 iimodeli ezithengiswayo kwi-Best Buy, kwaye nangona & iiapos zifumaneka kwakhona ngamaxabiso ahlukeneyo, zithotywe ngexabiso elifanayo: $ 70.
Phakathi kwexabiso eliphantsi, i-Apple Watch Series 2 38mm imodeli iyafumaneka kwiGrey Space, eGolide, nakwisilivere nge $ 229 nje (ezantsi isuka kwi- $ 299). Imodeli engama-42mm yi- $ 70 engabizi kakhulu, ke abathengi banokuthenga enye ngeedola ezingama-259 (ezantsi ukusuka kwi- $ 329).
Ezinye zeemodeli ze-Apple Watch Series 2 ziyafumaneka kwibhokisi evulekileyo yokufumana amaxabiso asezantsi, kodwa awuzukugcina imali eninzi ukuze ufumane ingxaki. Qiniseka ukuba ujonga i-Best Buy kunye neeapos kwivenkile ekwi-intanethi kuluhlu olupheleleyo lweewatchwatches eziphucukileyo.
Elona khadi lilungileyo le-microsdhc ye-android
Iapile & iiapos zeAirPods Pro ngoku zitshiphu kunangexesha leminyhadala yeAmazon & apos; Prime Day (intsha kraca)
Eyona misebenzi mihle yoSuku lweNkulumbuso yeAmazon
Lixesha eligqibeleleyo lokuqinisekisa ukuba eli nqaku likwi icon yakho yewijithali yePixel kunye neapos;
I-Pixel 3 iyatshisa kwaye iyazivalela ngelixa ihlawulisa abanye abanini